Semalt: Kutyisidzira Kwepfungwa Iwe Unogona Kuziva
Zvigadzirwa zvekuchengetedza tsika zvinowanzoita zvinopesana nezvingangozivikanwa. Mushure mokunge vaziva chimwe chinhu chinogona kunge chakaipa kune webusaiti, vanokurumidza kutora matanho. Cyber-mhosva vanonyatsoziva chokwadi ichi uye vanoedza kushandisa mari yakawanda kuti vadzive mapurogiramu matsva anoita zvirwere zvisingaoneki nemamiriro aya. Oliver King, the Semalt Mutevedzeri Wekubudirira Kwemutengi, anorondedzera pasi apa tsvina dzepyro dzakapararira iwe unofanirwa kubhadhara iwe - oculos ray ban na promoo.
Kutyisidzirwa kwezvinhu zvakadhindwa hakusviki sezvo vashandisi vezvigadzirwa zvekare vakangodzokorora zvinyorwa zvekare zvakashandiswa kurwisa masangano. Vanoshandisa zvishoma nezvekuti kuchengetedzwa kwezvinhu zvinenge zvisina kukwana yekuyeuka. Nyanzvi dzezvokuchengetedza dzinomanikidzwa kuti dzinotarisa zvingangoita zvinganyanya kutyisidzira uye dzisingateereri mazera ekare ekutyisidzira. Nokudaro, kana vashandisi vezvimhosva vachishandura zvinyorwa zvekare zvekutyisidzira, kune mikana yakareba yokuti kurwisa kungave kubudirira. Sezvo urongwa hwekuchengeteka husingazivi kukopo kwayo pane urongwa, zvino hunova dambudziko risingazivikanwi.
Muchengetedzi wehupenzi yekuyeuka ndiyo nzira yakanakisisa yekuchengetedza sangano rakadzivirirwa kubva pakurwiswa kwakadaro. Iripo mugore rinochengetedza zvivako izvo zvinokwanisa kuchengetedza dutu guru rekutyisidzira data..Kuchengetedzwa kwakadaro kunogona kuenzanisa njodzi yemazuva ano nezvose zvayo pane muyeuchidziri wekuyeuka uye wozvidzivirira kana zvichidiwa.
Kugadziriswa Kodhi Iripo
Vashandi vemhosva vanoshandura kugadzirisa kwekutyisidzira kuzivikanwa kugadzira dambudziko idzva uye risingazivikanwi kuburikidza nemunhu kana kuti kuwedzera zvido zvavo. Izvo zvitsva zvinoramba zvichiramba zvichinyanya kupfuura kuburikidza nemitambo yakasiyana. Chikonzero nei vachienda kusingaoneki ndeyekuti protocol yekuchengetedza inogona kungovimba nechimwe chete chinotarisana kuti chione kana chiitiko chiri chimiro chekuita zvepabonde. Vamwe vavo vanoshandisa teknolojia yekushandisa iyo inoshandisa magwaro ezvinyorwa mumutemo wekutarisa kutyisidzira. Kana mumwe munhu akafanana akachinjwa, inova yakakwana zvachose zvachose.
Misangano inogona kuzvidzivirira kubva pakurwiswa kwakadaro kuburikidza kushandisa zvinyorwa zvepolymorphic. Vanoona zvinogona kutyisidzirwa nokuziva zviri mukati zviri purogiramu uye kudzidza magwara emigwagwa kubva pachigaro.
Zvitsva zvakasikwa Zvinotyisa
Vanoita zvemhosva vanogona kunge vachida kuumba hutsva hwekushungurudza kwekunyora nekunyora nheyo yacho kubva pakutanga. Zvisinei, zvinoda kuti vashandise mari yakawanda mauri. Sangano rinogona kufanirwa kuongorora maitiro aro emabhizimisi uye kudhevedza kwedhesi, sezvo nzira dzakanakisisa dzekuchengeteka inogona kugadzirwa kuburikidza nezivo iyi.
Nzira yakanakisisa yekudzivisa kupikisa kwakadai ndeyokushandisa maitiro ekudzivirira. Tarisa kune zvakarongeka sangano rekugadzirisa dambudziko rakadaro. Iva nechokwadi chekutumira mafaira ose asina kujairika uye nzvimbo dzinoshungurudza kuti uongorore. Zvose izvi zvinofanira kuitwa nokukurumidza kuti kuderedze zvingave zvakakanganisika kana kufambira mberi kwekambani yekambani.